Indlela yokwenza i-Poop Ngethuba lohambo
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Ukuhamba
Ukuchasa ngaphandle akuvumelekanga ukuba kuluhlu lomntu "olufunekayo," kodwa awukwazi ukuludibanisa i-bullet ngonaphakade. Xa uluntu lubiza kwaye aluyi kucinywa, ngokuqinisekileyo unokhetho olubini: Bungcwaba amaqhosha akho okanye uwapake.
Ukuba uhlala kwindawo apho kungekho mabhaktheriya anele ukuhlalisa iifesi zakho, ezihambela kakhulu okanye apho kungekho ndawo efanelekileyo yokungcwaba loo nto, ukupakisha kwayo yinto ekhethekileyo kuphela.
Ukuba ungoko "ukupakisha" imeko ngaphandle kokubonelela, uya kufumana okanye uyigcine. (Esinye isizathu sokuba kutheni loo nto ingcono ukuba ne-zip-close plastic bags kwi-trail.)
Ngakolunye uhlangothi, ukuba ungowommandla ongaphezulu kweempawu zamanzi aphezulu kunye nomhlaba ocebileyo, ovelisayo (oko kukuthi unobhaktheriya ongenakukulinda ithuba lokuphula umsila wakho phantsi), lixesha lokuthetha u kungcwaba i-poop yakho.
Inkqubo ebalulekileyo ilula kakhulu: Umba umgodi-ngokuqhelekileyo u-6 ukuya kwii-8 intshi ezinzulu-usebenzisa zonke izixhobo ezilungele ukunikela okanye, kungcono nakhona, i-troil yakho ehamba kakuhle. (Kwiindawo ezisentlango eshushu, unokhetha ukwenza umgodi ungacacanga - 4 ukuya kuma-6 intshi.)
I-Squat phezu komngxuma, yenza ishishini lakho (zama ukukhawulela ukuxhathisa ngenxa yokuba utsho uKathleen Meyer, umbhali we "Indlela yokuShishisa kwi-Woods," ukujongana nomgodi ongenalo unako ukugcina i-poo), ucoce iziphumo, gcwalisa umgodi, kwaye uhambe ngendlela yakho yovuyo.
Ngokuqinisekileyo, akukho nto ihlala elula njengoko kubonakala nje ukuba ungaphandle kwendawo yamagumbi angasese kunye nezindlu zangasese ezigubungelayo-ke zilapha amanqaku ambalwa apho ukumba khona loo mgobo nendlela yokuhlambulula emva koko.
Ukukhetha i-Spot yakho
Ingcambu efanelekileyo yekati ibeka ingqungquthela yakho ubuncinane ubunzima beenyawo ezingama-200 ukusuka kwenkampu yakho, indawo yakho yokupheka, nayiphi na imithombo yamanzi kunye neendlela.
Khangela umhlaba ocebileyo, omnyama njengenqaku elikhulayo lomhlaba (elilingana nokuphula amanqatha akho ngokukhawuleza).
Ukukhusela imithombo yamanzi kuthetha okungakumbi kunokugwema amachibi kunye nemilambo. Khangela izikhombisi ezifihlakeleyo ukuba indawo ixhomekeke kwi-runoff rhoqo, amanzi emvula okanye amanzi aphezulu asemgangathweni, kwaye ubeke umngcele wakho wekati ngaphaya kofikelelo lwalo.
Ngokubhekiselele ekuhlambulukeni emva kokuhlenga ngaphandle, ngokuqinisekileyo uhlale uhlambulula uze uhlambulule - ngokuba xa usukuma, "iingcango zengcango zivaliwe."
Nazi ezinye iingcebiso ezilungileyo: Eschew iphepha eliyimfihlo malunga nezinto eziphathekayo (okanye ukuba usebenzisa iphepha langasese, ulipake). Naluphi na izinto zokwenza izinto ezisemgangathweni oyisebenzisayo-ukusuka kwidwala elicocekileyo ukuya kwi-sphagnum moss, iphepha le-yang yemvelo yangasese Unakho ukhetho lokuhlanjululwa, isitayela se-bidet, kunye namanzi ambalwa kwibhotile yakho yamanzi.
Ngaphambi kokuba ugcwalise imbobo yekati, gxobhoza ukungcola kuyo kuyo ngentonga - ukuxuba izinto zifumana inkqubo yokubola. Ukulahla uthethelela emgodini kwaye usetyenzise inkampu yakho yekampu okanye ithuluzi lokucoca elithuthukisiwe ukugcwalisa umgodi.
Iyiphi Intente yeVente?
Isikhokelo kuJoshuwa Umthi weSizwe weSizwe oMnandi kakhulu kwiiNtaba zeeNtaba
Indlela yokunyuka eMvula kunye noKonwaba
Iindlela ezine zokufakela iipolisi zokuhamba kwi-Backpack yakho
I-Best Ice Grippers for Hikers
Ukuhlaziywa kwe-Osprey Exos 38 Pack
Igalari yeBhark signs
Ngaba Abasetyhini Banokubamba Ngetekeni Ngethuba Lokubuyela Kwakho?
Ndingabaleka Kangakanani Kangamaxesha Amanqabunga?
Iindlela ezi-5 zokufakela i-Snowshoes kwi-Backpack yakho
Izixhobo kunye neebhondi ze-Ionic kunye ne-Covalent Bonds
Ubunini Ngokusebenza Ngezempi
Uvavanyo lweBattery Test and Load Testing
Umehluko Phakathi kweCanjun Music kunye neZydeco
Ngaba iinqununu zifunda?
UDaniel - Umprofeti ogqithisiwe
Khawukhumbule lo Mthandazo ngoBawo wakho olahlekileyo
30 Amazwi Ngomntwana Omncinci Nengenasiphelo Tracey Bregman
Fumana indlela yokuchonga ngokukhawuleza kunye nokuchonga i-Skin Care Syndrome
2017 IiNqantyambo zamagama
Elipheleleyo Uluhlu lwabaGymnasts abenza iQela leOlimpiki ka-2008
Hlola ukusekwa kwe "I-Streetcar Name"
Salve Umbhalo wesiLatin waseLatin kunye nesiNgesi
Aries kunye noxinzelelo
Ukuwa kweBass Amathiphu kunye nokucwangcisa
Indlela yokwenza iCode Comet ngomsila
Ibali likaRigoberta Menchu, uMvukeli waseGuatemala
I-Dorine's Monologue kwi "Tartuffe" kaMoliere
Yayiyintoni i-Conspiracy of Catiline?
Inyanga ye-Sidereal Versus Month Month (Synodic)
Yiyiphi Ingongoma Yokusasazeka kwi-NBA Basketball?
Quotes Teachers Famous
Imbali ye-American Folk Songs
Ngaba isenzi sesiFrentshi 'savo' sidinga ukuhlanganiswa?